घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम हो "Declan"। हाम्रो Declan चावल बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य तपाईं बच्चाहरु को समय देखि आफ्नो बच्चाहरु को उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूर्ण खाता ल्याउन। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्न समावेश छ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक खेलाडी भविष्यको लागि निकै सम्भव छ। तथापि, केवल केहि केहि डिलाल चावल को जीवनी जो एकदम दिलचस्प छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
डेक्लान राइस जनवरी 14 को 1999th दिन मा आफ्नो पिता, सेन चावल र आमा टेरेसा चावल को जन्म भएको थियो। लन्डन, यूनाइटेड किंगडम। Declan चावल आयरिश मूल को हो र त्यो आफ्नो पिता को आयरिश मा आमाबाबु मार्गरेट र जैक देखि थाहा पाउन सकिन्छ जो डगलस, जो कर्क शहर, आयरल्याण्ड को एक उपनगरीय हो। तल फुटबलर र उनको प्यारी बुबा, सेन चावल छ।
आफ्ना हजुरबुबालाई धन्यवाद र उनको आमा, टेरेसा, आयरल्याण्ड मा सह लङफोर्डबाट भएको थियो, डिमनले विश्वास गर्छन् कि तिनी ब्रिटेनमा दोस्रो-पीढी आयरिश हुन्। संक्षेप मा, एक व्यक्ति को रूप मा Declan आयरिश हो तर एक ब्रिटिश दिल छ।
डेक्लान चावलले आफ्नो आमा, पिता र सम्भवतः कुनै पनि राजा वा बहिनीले किंग्स्टनमा किंग्स्टनमा बसाए। एक सानो केटाको रूपमा, पूर्तिको भावना जब पनि उनको खुट्टामा फुटबल छ। सामान्यतया, सबै भन्दा सानो डिज्सन अनुरोध गरिएको थियो जो फुटबलको रूपमा आए। खेलको लागि त्यस्ता समानताले पछिल्ला लाभांश भुक्तानी गर्यो।
डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
फुटबलका लागि डेसनको जुनूनले उनी सफल भएपछि अन्य नयाँ युवतीले चेल्सी फुटबल अकादमीको रोस्टरमा नामांकन गरे। त्यो एक अकादमी द्वारा प्रतिस्पर्धी अवधि को समयमा चुने केहि केटाहरु मध्ये एक थियो, एक समय चेल्सी एफसी अझै रूसी बोलचाल द्वारा सुधार भएको थियो, रोमन अब्रामोविच.
त्यो वर्ष 2006, डेक्लसनको करियरको आधार सात वर्षको उमेरमा राखिएको थियो। यो चावल परिवारको लागि एक रोमाञ्चक समय थियो जुन उनीहरूले छोरालाई एक क्लबको जवान हातमा प्रवेश गर्थे जुन भर्खरै विशेष गरी पुनर्जुन भयो। Jose Mourinho.
डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि
Chelsea एफसी अकादमी जीवन उस समयमा सजिलो छैन। यसको कारण, केवल सबै भन्दा कठिन बच्चाहरु अकादमी मार्फत बचे। अन्य अकादमी खेलाडीहरू जस्तै, असुरक्षा डेमन रस को लागि सबै भन्दा ठूलो समस्या थियो जसले आफ्नो टोली साथीहरु को आफ्नो प्रतिद्वंद्वी को रूप मा देख्यो। उनले पतला मौकाहरू जिते र उनीहरूलाई उच्च उमेरको रैंकमा प्रगति गर्न लडे। डेनसनले उमेरको संख्यामा प्रगति गरिसकेपछि उनले एक्सएनएनएमएक्सएक्स टीम अन्तर्गत अविस्मरणीय चेल्साको उच्च प्रतिस्पर्धी पाए।
Declan चावल अन्य केहि बच्चाहरु मध्ये थियो जसले आफूलाई X -UMX वर्ष अन्तर्गत चेल्सी एफसी वातावरणमा काली गलेजमा संघर्ष गरिरहेका थिए। दुःखको कुरा, गरीब डेक्लानले दबावसँग सामना गर्न सकेन र यसले ठूलो परिणाम ल्यायो। उनीहरूलाई चेल्सी अकादमीले रिहाईएको थियो जसले उहाँलाई आवश्यकताहरु को लागी एक अधिशेषको रूपमा देखाएको थियो।
त्यस वर्ष, 2014 वर्षको उमेरमा डेक्लान राइस एक युवा इच्छुक फुटबल स्टारको रूपमा अवसादको सामना थियो। कुनै शक बिना, कुनै पनि बच्चा फुटबलर अकादमी अस्वीकृति मार्फत बसोबास मात्र यो राम्रो कारण गहिरो भावनात्मक पीडा र हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणामहरू थाहा पाउनेछ। निबिल फेक पनि त्यस्ता भाग्यको सामना गर्नु पर्यो।
चेल्सी अकादमी अस्वीकृति को बावजूद, उनको ड्वेडवर्ड्स सम्म सम्म का निर्धारण। त्यही वर्ष 2014, डिजनन को एकेडेमी को वेस्ट हाम संयुक्त द्वारा परीक्षण को लागि बुलाया गएको थियो। मा वेस्ट हाम, डेसनले पाए आफ्नो परेशान वास्तविकता देखि दूर रहयो।
डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
राम्रो जीवनको लागि सडकमा प्रो:
16 डिसेम्बर 2015 मा, वेस हम युवतीमा भर्खर एक वर्ष पछि, राइसले आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौता क्लबसँग हस्ताक्षर गरे र यूएक्सएनएमएमएक्स क्लब क्लबको लागि सुविधा सुरु गर्यो। यो एक समय थियो जब उनले उपलब्धिहरू सुरू गरे। पहिलोपटक नोभेम्बर 23 को 10th मा आयो जब चावल अक्टोबर, 2017 को PL2 खेलाडी जीता।
2018 मार्च मा, चावल को वर्ष को u19 खेलाडी संग सम्मानित गरियो। यो लेकले उनलाई एक वरिष्ठ टीम टिकट कमायो।
हमरहरूको लागि डिलसनको पहिलो खेलले उनलाई म्याचको उपाधि जित्यो। फुटबलको अनुसार; ..."यो मेरो परिवार र मेरो परिवारको लागि एकदमै गौरवपूर्ण क्षण थियो। मेरो बुबालाई ठूलो प्रेम जो आउन बाहिर आउनुभयो र हेर्नु भयो, तिमीलाई प्रेम गर्छु। "
अप्रिल 2018 मा, डेनसन चावल को 2017-18 हमर को साल को पुरस्कार को लागि रनर अप को नामित गरियो जसलाई दिइएको थियो मार्को अर्ननाभोकी। उनको लागि हारने को बावजूद, राइस को दोश्रो साल को लागि दौड को लागि साल को युवा हथौड़ा को लागि एक अन्य पुरस्कार बनाए।
एक कथन बनाउँदै:
"म यहाँ फिर्ता आउनुभयो पछि 14 मा चेल्सी द्वारा रिलीज भएपछि र पाँच वर्ष पछि म प्रिमियर लीगमा पश्चिम हामको लागि खेलिरहेको छु," राईले जो 14 को उमेर मा चेल्सी द्वारा रिलीज गरियो।
त्यो आइतबार एक पागल दिन थियो र जसले जसले डेल्लान चावल परिवारलाई आफ्नो उपलब्धिहरूमा निकै गर्व बनायो। चावलले यस अवसरलाई चेलिया प्रमाणित गर्न कसरी प्रयोग गर्यो त्यो राम्रो छ। उनले क्लबलाई एक बयान दिए र उनको प्रदर्शन संग धेरै खुसी थिए।
23 डिसेम्बर 2018 मा, चावल उनको 50th उपस्थिति पश्चिम हाम को लागि बनाइयो। उनीहरूले त्यहि काम गर्ने पहिलो खेलाडी भए तापनि अहिलेसम्म किशोरीलाई पिटेको छ माइकल क्यारिकको रेकर्ड। मन सिटीबाट रुचि देख्न पछि, पश्चिम हामले 2024 सम्म एक अतिरिक्त वर्ष को विकल्प संग नयाँ अनुबंध प्रस्ताव गरे। त्यो परिभाषित क्षणमा भिडियोमा राखिएको थियो;
डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
डेक्लान चावल भनेको युवकले आफ्नो किशोर वर्षको दौडान मायालु अनुभव अनुभव गर्दछन्। उनले सँगी केटाकेटीसँग सम्बन्ध राख्न निर्णय गरे त्यसैले यो सामाजिक मीडियामा पनि सार्वजनिक बनाउँछ।
प्रायः युवा फुटबलरहरूको विपरीत, सम्बन्ध सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो राम्रो विचार होइन कि यस्ता सार्वजनिक परीक्षाले उनीहरूको जवान क्यारियरलाई असर पार्न सक्छ। तर, तथापि, डिज्लान चावल को मामला छैन जसले पहिले नै त्यो स्टक बनाएको हो भनेर थाहा छ। फुटबल स्टारको पछि, लरेन फ्र्रीरको नाममा ग्लैमरस वाग हो जुन उनको प्रेमीसँग एकै उमेर हो।
चावल एक प्रकारको प्रेमी हो जसले आफ्नो प्रेमिकालाई मायालु गीत गाऊ, कविता लेख्नुहोस्, चित्रहरू चित्रित गर्नुहोस् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा, उनीहरूको मायालु फोटोहरू र लरेन फेरीको साथमा प्रेम प्रेम गीतहरू सिर्जना गर्न सक्छ। तल यस्तो भिडीयो मध्ये एक हो।
डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- जीवन शैली
28th डिसेम्बर भन्दा पहिले, 2018, डिजनले पाउन्ड 3,000-हप्ताको एक मूंगफली कमाई। लेखनको समयमा, उहाँले £ 30,000-एक-हप्ता कमाउनुभएको छ जुन शाब्दिक जीवन शैलीको परिवर्तनको अर्थ बुझाउँछ।
डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
पश्चिम ह्याडम अकादमीमा सामेल हुँदा डेलासन, डेकनले पब्लो जब्बाटाका प्रशंसक र प्रशंसक बनेका थिए जसले त्यस समय म्यान अफ सिटीमा खेले।
अर्जेन्टिनाको प्रशंसाको बारेमा बोल्दै, उहाँले एक पटक भन्नुभयो ...; "म 2014 मा पाब्लो को एक प्रशंसक थियो। फ्यानबाट, म तिनको सहभागिता भए
डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
डिसेल चावलको व्यक्तिगत जीवन जान्नको लागी तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
Declan कुनै व्यक्ति हो जुन आन्तरिक स्वतन्त्र राज्य हो जसले त्यसलाई व्यक्तिगत जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्न सक्षम बनायो। डिसेल मा निर्मित चेल्सी एफसी अकादमी द्वारा रिलीज भएको छ कि कठोर मानसिकता र अनुशासन जुन उनको वर्तमान शैली को प्रतिबिंबित गर्दछ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Declan चावल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
लेस रबर्ट्स जनवरी २,, २०२० १०:०० अपराह्न
डेल्लान, आजको पहिलो गोल तपाईंको पहिलो लक्ष्यको स्कोरमा बधाई छ। क्रक गर्ने लक्ष्य, र एक शानदार करियर कार्डहरूमा छ।
(कृपया इंग्ल्याण्डको लागि प्ले गर्नुहोस्)। lol।
त्यसोभए, मैले केही वर्षअघि आफ्नो बुबालाई छुटेको छु, र उहाँसँग उठ्न मन लागेन, म मेरो जीवनमा भेटिएको मजेदार व्यक्ति।
यदि तपाई उसलाई थाहा पाउन सक्नु भएको छ कि प्लसम्बर ले एफपीएस दिन ले उनको सबै भन्दा राम्रो पठाउछ, म सदाको लागि आभारी हुनेछु।
यो काठको काम होइन, म Westham नफरत, एक जीवनभर qpr प्रशंसक हो, केवल मजाक।
दमकल, लेस रबर्ट्स।
विलियम वाउज मार्च 29, 2019 12 मा: 13 बिहान
डेक्लानको बुबा, सेन, जब हाम्रो 11 थियो हाम्रो स्कूल टोलीमा खेल खेल्न सक्छ?
हामीले किंग्स्स्टोनको पुरानो बर्टन रोड ग्राउण्डमा 'कप' खेलाएका छौं।